Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.6.1 Abuur eber xogta qiimaha variable
Fure u ah tijaabinta tijaabooyinka waaweyn waa inaad ku qaaddo kharashkaaga variable eber. Siyaabaha ugu fiican ee loo sameyn karo tan waa autism iyo naqshadaynta tijaabooyin xiiso leh.
Tijaabooyinka digital waxay yeelan karaan qaabab qiimo badan oo kala duwan, taasina waxay u suuragelisaa cilmi-baarayaasha inay tijaabiyaan tijaabooyinka aan macquul ahayn ee hore. Hal siyaabood oo looga fekerayo farqigaas waa in la ogaado in tijaabooyinka guud ahaan ay leeyihiin laba nooc oo kharash ah: kharashyada joogtada ah iyo kharashka qiimaha leh. Kharashyada kharashka ah waa kharashyada aan wali la beddelin iyadoo aan loo eegin tirada ka qaybgalayaasha. Tusaale ahaan, tijaabada shaybaarka, kharashka joogtada ahi wuxuu noqon karaa kharashka kirada boosaska iyo iibsashada alaabta guriga. Kharashaadka isbeddelka , dhanka kale, isbedel ku xiran tirada ka qaybgalayaasha. Tusaale ahaan, tijaabada shaybaarka, kharashka isbeddelka ahi wuxuu ka iman karaa shaqaalaha iyo ka qaybgalayaasha. Guud ahaan, tijaabooyinka analogtu waxay leeyihiin kharashyo go'an oo qiimo jaban iyo kharashyada badan ee qiimaha leh, halka tijaabooyinka dijitalka ah ay leeyihiin kharashyo badan oo qiime jaban iyo kharashka hooseeya (sawirka 4.19). Inkasta oo khibradaha dijitaalka ah ay leeyihiin kharashyo badan oo qiimo jaban, waxaad abuuri kartaa fursado badan oo xiiso leh markaad kaxeynayso qiimaha bedelka oo dhan sida eberka.
Jaantuska 4-aad: Tixgelinta qaab-dhismeedka kharashka ee tijaabooyinka analoogga ah iyo kuwa dijitalka ah. Guud ahaan, tijaabooyinka analogga ah waxay leeyihiin kharashyo go'an oo qiimo jaban iyo kharashaad badan oo qiimo badan halka tijaabooyinka dijitaalka ah ay leeyihiin kharashyo badan oo qiimo jaban iyo kharashyada yaryar. Qiimaha kharashyada kala duwan ayaa micnaheedu yahay in tijaabooyinka dijitalka ah ay ku socon karaan miisaan aan suurtagal ahayn tijaabooyinka analogga ah.
Waxaa jira laba waxyaalood oo isbeddel ah oo lacag-bixineed ah oo loogu talagalay shaqaalaha iyo lacag-bixinta ka-qaybgalayaasha- mid kasta oo ka mid ah kuwan waxaa loo adeegsan karaa eber iyadoo la adeegsanayo xeelado kala duwan. Lacagta shaqaaluhu waxay ka timaadaa shaqada ay caawiyayaashu cilmi-baadhistu qorayaan ka qaybgalayaasha, bixinta daaweynta, iyo cabiraadda natiijooyinka. Tusaale ahaan, tijaabada analog ee Schultz iyo saaxiibada (2007) isticmaalka korontada ayaa looga baahan yahay caawiyayaasha cilmi-baarista ee u safraya guri walba si ay u bixiyaan daaweynta oo akhriyaan mitirka korantada (Tirada 4.3). Dhammaan dadaalladan oo ay ka heleen kaaliyeyaashii cilmibaadhista micnaheedu waa in lagu daro guri cusub oo daraasaddan ku dari lahaa kharashka. Dhinaca kale, tijaabooyinka sahan ee digital-ka ah ee Restivo iyo van de Rijt (2012) oo saameyn ku yeelatay abaal-marinta ku-xigeenka Wikipedia, cilmi-baarayaashu waxay ku dari karaan kaqeybgalayaal badan oo aan qiime ahaan lahayn. Istaraatiijiyad guud oo lagu yareeyo qarashka maamulka ee isbeddelka waa in la badalo shaqada bini'aadamka (taas oo qaali ah) shaqada kombuyuutarka (oo jaban). Qiyaas ahaan, waxaad isweydiin kartaa naftaada: Miyuu tijaabadani socon karaa inta uu qof kasta oo ka tirsan kooxdayda cilmi-baaristu ay seexanayso? Haddii jawaabtu ay haa tahay, waxaad sameysay shaqo weyn oo otomaatig ah.
Nooca labaad ee ugu weyn ee kharashka ku baxa waa lacag bixinta ka qaybgalayaasha. Qaar ka mid ah cilmi-baarayaasha ayaa isticmaala Amazon Mechanical Turk iyo suuqyada kale ee internetka si loo yareeyo lacagaha looga baahan yahay ka qaybgalayaasha. Si loo wanaajiyo kharashka isbeddelka oo dhan si eber, si kastaba ha ahaatee, habab kale ayaa loo baahan yahay. Muddo dheer, cilmi-baarayaashu waxay qorsheeyeen tijaabo aad u caajis ah oo ay tahay in ay dadka bixiyaan si ay uga qayb qaataan. Laakiin maxaa dhacaya haddii aad samayn karto tijaabo ah in dadku rabaan inay joogaan? Tani waxay noqon kartaa mid aad u fog, laakiin waxaan ku tusi doonaa tusaaleyaal ka hooseeya shaqadayda, waxaana jira tusaalooyin badan oo ka mid ah jadwalka 4.4. Ogsoonow fikraddan samaynta tijaabooyinka xiisaha leh waxay soo dhaweeyeen qaar ka mid ah mawduucyada ku jira cutubka 3 ee ku saabsan samaynta sahammo farxad badan iyo cutubka 5 oo ku saabsan qaabeynta iskaashiga ballaaran. Sidaa darteed, waxaan u maleynayaa in ka qaybgalayaasha ku raaxaysto-waxa laga yaabo in loo yeero waayo aragnimada isticmaale-waxay noqon doontaa qayb muhiim ah oo ka mid ah naqshadeynta cilmi-baarista ee da'da digital.
Jadwalka 4.4: Tusaalooyinka Tijaabooyinka leh Qiimaha Isbedelka Nidaamka ee Lagu Sameeyey Ka Qeybgalayaasha leh Adeeg Qiima leh ama Khibrad Wanaagsan.
Bogga internetka ee macluumaadka caafimaadka Centola (2010)
Barnaamijka jimicsiga Centola (2011)
Muusig bilaash ah Salganik, Dodds, and Watts (2006) ; Salganik and Watts (2008) ; Salganik and Watts (2009b)
Ciyaar xiiso leh Kohli et al. (2012)
Talooyinka heesaha Harper and Konstan (2015)
Haddii aad rabto inaad samayso tijaabooyin leh xogta qiimaha eber, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in wax walba si buuxda u shaqeynayaan iyo ka qaybgalayaashu aysan u baahnayn lacag. Si loo muujiyo sida ay suurtogal u tahay, waxaan ku sharxi doonaa cilmi-baarista nuqulka ee ku saabsan guusha iyo guuldarada alaabooyinka dhaqanka.
Dareemiskaygu wuxuu ahaa mid dhiiri galiyay dabeecadda yaabka leh ee ku guulaysiga alaabooyinka dhaqanka. Ku dheji heesaha, buugaagta ugu badan ee iibiya, iyo filimada jilitaanka ah waa mid aad u badan, aad uga guulaystay celcelis ahaan. Sidaa darted, suuqyada badeecadahan waxaa badanaa lagu magacaabaa "suuq-geyn". Hase yeeshee, waqti isku mid ah, heeso gaar ah, buug, ama filin ayaa lagu guuleysanayaa waa wax aan la saadaalin Karin. Sawir gacmeedka William Goldman (1989) si adag u soo koobay cilmibaaris badan oo cilmi-baaris ah iyada oo la sheegayo, marka ay timaaddo saadaalinta guusha, "qofna ma garanayo wax." Dareenka aan la saadaalin karin ee suuqyada ku guuleysta oo dhan ayaa iga warramay inta badan guusha natiijada tayada iyo inta uu leeg yahay nasiibka. Ama, waxay muujiyeen waxoogaa si ka duwan, haddii aan abuuri karno adduunyo isku mid ah, oo dhammaantoodna si madaxbannaan ayaa u kobciya, heesaha isku mid ma noqdaan kuwo caan ku ah adduun kasta? Iyo, haddii aysan ahayn, maxay noqon kartaa farsamo sababaysa kala duwanaanshahan?
Si aad uga jawaabto su'aalahan, waxaan-Peter Dodds, Duncan Watts (la-taliye diineedkaygu), oo waxaan la socdaa tijaabooyin taxane ah oo online ah. Gaar ahaan, waxaan dhisnay website la yiraahdo MusicLab halkaas oo dadku ay ka heli karaan muusig cusub, waxaana u adeegsanay tijaabooyin taxane ah. Waxaan kaqeybqaatey kaqeybgalayaasha adigoo ku dhex xayeysiisay xayeysiiska banner ee shabakada internetka danaha dhalinyarada (jaantuska 4.20) iyo iyada oo lagu sheegayo warbaahinta. Ka-qaybgalayaasha imanaya boggayaga internetka waxay bixiyaan ogolaansho la wargeliyay, waxay soo buuxiyeen su'aalo taariikhda gaaban, oo si aan kala sooc lahayn loogu qoondeeyey mid ka mid ah laba xaaladood oo tijaabo ah- saameyn madaxbannaan iyo bulsho. Xaaladda madax-bannaan, ka-qaybgalayaashu waxay sameeyeen go'aano ku saabsan heesaha dhageysanaya, oo la siiyay magacyada bandhiyada iyo heesaha. Inta ay dhageysanaayeen heesaha, ka qaybgalayaasha ayaa la waydiiyay inay qiimeeyaan ka dib markii ay fursad u heleen (laakiin ma aha waajibka) inay soo dejiyaan heesta. Xaaladda saameynta bulsheed, kaqeybgalayaashu waxay lahaayeen khibrad la mid ah, marka laga reebo inay sidoo kale arki karaan inta jeer ee gabay kasta lagu soo dejiyey ka qaybgalayaashii hore. Waxaa intaa dheer, ka qaybgalayaasha xaaladaha bulshada ee si aan kala sooc lahayn loogu qoondeeyey mid ka mida sideed adduun oo isku mid ah, mid kasta oo ka mid ah oo si madaxbanaan u kobcay (Jaantus 4.21). Isticmaalidda naqshadahan, waxaanu raacnay labo tijaabo oo la xidhiidha. Marka ugu horreysa, waxaan soo bandhignay heesaha ka qaybgalayaasha ee shabakad aan kala go 'lahayn, taas oo u keentay calaamad daciif ah oo caan ah. Imtixaanka labaad, waxaan soo bandhignay heesaha liisaska liiska, taas oo bixisay calaamad muujinaysa calaamad muujineysa (jaangooyada 4.22).
Jaantuska 4.20: Tusaale ahaan banner ad oo ah saaxiibaday iyo aniguba waxaan u adeegsan jiray kaqeybgalayaasha tijaabooyinka (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Waxaa dib loo soo saaray iyadoo la fasaxay Salganik (2007) , shaxda 2.12.
Jaantuska 4.21: Naqshadaynta tijaabada ah ee tijaabooyinka (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ka qaybgalayaasha ayaa si aan kala sooc lahayn loogu qoondeeyey mid ka mid ah laba shuruudood: saameyn madaxbannaan iyo mid bulsheed Ka qaybgalayaasha xaalad madaxbannaan waxay doorteen doorashooyin iyaga oo aan wax macluumaad ah oo ku saabsan waxa dadka kale sameeyeen. Ka qaybgalayaasha xaaladda xaaladaha bulshada ayaa si aan kala sooc lahayn loogu qoondeeyey mid ka mida sideed adduun oo isku mid ah, halkaas oo ay arki karaan caan - sida lagu qiyaaso ka-qaybgalayaashii hore-gabay kasta oo adduunka ah, laakiin ma ay arki karin wax macluumaad ah oo ku saabsan, mana xitaa ogtahay jiritaanka, mid ka mid ah adduunka kale. Waxaa laga soo qaatay Salganik, Dodds, and Watts (2006) , tirada s1.
Waxaan ogaanay in caan ka mid ah heesaha ay ku kala duwan yihiin adduunka oo dhan, iyagoo soo jeedinaya in nasiibku door muhiim ah ka qaatay guusha. Tusaale ahaan, hal keli ah heeso "Lockdown" oo ay sameysay 52Metro ayaa ka soo muuqday 1-da 48-da musharax, halka adduunkuna uu ahaa 40 -aad. Tani waxay ahayd gabyaan isku mid ah oo ka soo horjeeda dhammaan heesaha kale, laakiin dunidu waxay nasiib u heshay, kuwa kalena ma aysan qaban. Intaa ka sokow, marka la barbardhigo natiijooyinka labada tijaabo, waxaynu ogaanay in saamaynta bulshadu kordhinayso dabeecadda-qaadashada dhammaan suuqyadan, oo laga yaabo in laga yaabo inay muujiso muhiimadda xirfadeed. Laakiin, adoo eegaya aduunka oo dhan (oo aan la samayn karin meel ka baxsan tijaabooyinka caalamiga ah ee isku midka ah), waxaan ogaaday in saameynta bulshadu dhab ahaantii kordhisay muhiimada ay nasiib u leedahay. Dheeraad ah, si la yaab leh, waxay ahayd heesaha rafcaanka ugu sareeya ee nasiibka ugu muhiimsan (jaangooyada 4.23).
Jaantuska 4.22: Sawirrada ka soo jeeda xaaladaha bulshada ee tijaabooyinka (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Xaaladda saameynta bulshada ee tijaabada 1, heesaha, oo ay la socoto tirada soo-celinta hore, ayaa loo soo bandhigay kaqeybgalayaasha loogu talagalay qorshe ah 16 \_(\_times\_) 3 qaab, taas oo jagooyinka heesaha si aan kala sooc lahayn loogu qoondeeyey mid kasta kaqeybgal Imtixaanka 2, kaqeybgalayaasha xaaladda saameynta bulshada ayaa lagu muujiyay heesaha, iyadoo la soo koobi doono tirooyinka, oo lagu soo bandhigay hal tiir oo ku yaalla nidaamka xajmiga ee caanaha hadda jira.
Jaantuska 4.23: Natiijooyinka ka soo baxay tijaabooyinka MusicLab oo muujinaya xiriirka ka dhaxeeya rafcaanka iyo guusha (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . The \_(x\_) -axis waa qaybta suuqa ee gabayada adduunka madaxbannaan, taas oo u adeegta cabiraadda riwaayadda, iyo \_(y\_) -axis waa qaybta suuqyada ee gabay isku mid ah siddeedkii adduun ee saamaynta bulsheed, oo u adeega sidii heer lagu guuleysto heesaha. Waxaan ogaannay in kordhinta saameynta bulsheed ee kaqeybgalayaasha - gaar ahaan, isbeddelka qaabeynta laylinta 1aad ee tijaabinta 2 (jaangooyada 4.22) -waxay ku guulaysatay guusha si aan loo sii qabin, gaar ahaan heesaha rafcaanka ugu sareeya. Laga soo bilaabo Salganik, Dodds, and Watts (2006) , sawirka 3.
MusicLab wuxuu awooday inuu ku ordo qiime ahaan qiimaha wax ku oolka ah eber sababta oo ah habka loo qorsheeyey. Marka hore, wax walba si buuxda ayuu u shaqeeyaa si ay u awoodaan in ay ordo inta aan hurday. Tan labaad, magdhowgu wuxuu ahaa muusikada bilaashka ah, markaa wax kharash ah kuma jirin kharashka kaqeybgalayaasha. Isticmaalka muusikada sida mag-dhawga ayaa sidoo kale muujinaya sida ay mararka qaarkood ujirto-ganacsi u dhexeeya kharashyada joogtada ah iyo kuwa isbeddela. Isticmaalka muusikada waxay kordhisay kharashyada joogtada ah, sababtoo ah waxaan ku qasbanahay inaan wakhti u helo ogolaansho ka timaada guutooyinka iyo diyaarinta warbixinno ku saabsan ka-qaybgalayaasha waxyeelladooda muusigooda. Laakiin kiiskan, kordhinta kharashaadka joogtada ah si loo yareeyo qiimaha doorsoomayaasha ayaa ah waxa haboon in la sameeyo; Taasi waa noo suurtagelisay inaan tijaabino tijaabo ah oo ku saabsan 100 jeer ka weyn tijaabada tijaabada shaybaadhka.
Dheeraad ah, tijaabooyinka MusicLab waxay muujinayaan in kharashka ku-galka ah ee aan badneyn uusan aheyn mid dhameystiran; Halkii, waxay noqon kartaa macnaheedu yahay in la mariyo tijaabo cusub. U fiirso inaanan isticmaalin dhamaanteen kaqaybgaleyaasheena si aan u tijaabinno tijaabada shaybaar ee saamiga bulshada 100 jeer. Taas bedelkeed, wax kale oo aan samaynay, oo aad ka fakari kartid inaad ka bedesho tijaabada cilmi-nafsiga ee cilmi-nafsiga (Hedström 2006) . Halkii aan diiradda saari lahaa go'aaminta shakhsi ahaaneed, waxaanu diiradda saarnay tijaabadeena caan ah, natiijo wadajir ah. Tani waxay u badashaa natiijada wadajir ah taas oo macnaheedu yahay in aan u baahannay ilaa 700 ka qaybgalayaasha inay soo saaraan hal dhibic oo xog ah (waxaa jiray 700 qof oo ka mid ah adduunyada isku midka ah). Miisaankani wuxuu suurtogal u ahaa oo kaliya sababtoo ah qaabka kharashka ee tijaabada. Guud ahaan, haddii cilmi-baarayaashu ay doonayaan inay bartaan sida natiijooyinka wadajirka ah ay uga soo baxaan go'aannada shakhsiyadeed, kooxaha tijaabada ah sida MusicLab waa kuwo xiiso leh. Waagii hore, waxay ahaayeen kuwo si tartiib tartiib ah u adag, laakiin dhibaatooyinkaasi waa ay hoos u dhacaan sababtoo ah suurtogalnimada xogta qiimaha badhaxa eber.
Marka lagu daro muujinta faa'iidooyinka xogta kharashka badan eber, tijaabooyinka MusicLab ayaa sidoo kale muujinaya caqabadan habkan: kharashyada joogtada ah. Xaaladayda, waxaan ahaa nasiib aad u nasiib badan oo awood u leh in ay la shaqeyso horumariye websaydh la yiraahdo Peter Hausel ilaa lix bilood si loo dhiso tijaabinta. Tani waxay suurtagal tahay keliya sababtoo ah la taliyahayga, Duncan Watts, ayaa helay deeqo badan si ay u taageeraan noocan cilmi baarista ah. Tiknoolajiyada ayaa soo hagaagtay tan iyo markii aan dhisnay MusicLab 2004-ta, sidaas darteed way sahlanaan lahayd in la dhiso tijaabo sidan oo kale ah. Hase yeeshe, istaraatijiyaadka kharashka badan ee joogtada ah ayaa dhab ahaantii suurtagal ah keliya ee cilmi-baarayaasha oo si toos ah u daboolaya kharashyada
Gebogabadii, tijaabooyinka dijitalka ah waxay leeyihiin qaabab qiimo kala duwan oo ka duwan tijaabooyinka analogga ah. Haddii aad rabto in aad tijaabiso tijaabooyin aad u ballaaran, waa inaad isku daydaa inaad hoos u dhigto kharashkaaga inta ugu badan ee suurtogalka ah iyo habka ugu habboon eber eber. Waxaad samayn kartaa tan adoo si toos ah ugu shaqeynaya farsamooyinka tijaabadaada (tusaale ahaan, bedelida waqtiga aadanaha wakhtiga kombuyuutarka) iyo dejinta tijaabooyinka ay dadku rabaan in ay ku jiraan. Cilmi-baadhayaasha samayn kara tijaabooyinka leh sifooyinkaas waxay awoodi doonaan in ay kashaqeeyaan noocyo cusub oo tijaabo ah suurtagal maaha in la soo dhaafay. Hase yeeshee, awoodda loo leeyahay in la sameeyo tijaabooyin qiime yar oo isbeddel ah ayaa kordhin kara su'aalaha anshaxa cusub, mawduuca aan hadda wax ka qaban doono.